Waxaad ballan ka sameysan kartaa mid ka mid ah seddexdeenna meelood adigoo wacaya lambarka xafiiska PWHealth ugu weyn. Waxaad sidoo kale codsan kartaa ballan adigoo maraya boggayaga bukaan socodka. Soo dhaweynta taleefanka ayaa kaa caawin doonta inaad sameysato ballan sida ugu habboon ugu macquulsan.
Fadlan sheeg sedexdayada meelood ee aad jeceshahay in lagugu arko iyo adeeg bixiyaha aad jeclaan lahayd booqashadaas. Maskaxda ku hay in adeeg bixiyayaashu joogaan xafiisyo kala duwan maalmo kala duwan, laakiin inta badan bixiyeyaashu waxay aadaan dhammaan saddexda xafiis waxayna hal habeen ku hoydaan hal xafiis toddobaad kasta. Dhakhaatiirteena ayaa waqti uga qaata xafiiska si meertada ah si ay qalliin ugu sameeyaan una umulaan carruurta.
Fadlan xusuusnow inaad soo qaadato kaarkaaga caymiska isla markaana aad wada bixiso kharashka booqashadaada.
Balanqaadyada joogtada ah, oo ay ku jiraan dabagal:
Fadlan isku day oo jadwal u samee imtixaannadaada caadiga ah 8 toddobaad kahor si aad u hesho maalinta, waqtiga, iyo adeeg bixiyaha aad rabto inaad aragto. Waan ku soo gali karnaa si dhakhso leh haddii loo baahdo, laakiin jadwalka ayaa ka sii buuxsami doona xulashooyin yar.
Fadlan u sharax dhibaatadaada soo-dhoweynta si nooca booqashada habboon iyo waqtiga loo ballamiyo. Soo dhaweyaha ayaa laga yaabaa inuu farriin qaato oo kalkaalisada caafimaad ay kuugu soo wacdo si ay u ballansato booqasho dhibaato ah.
Balanqaadyo Isku Maalin ah:
Waxaan isku dayeynaa inaan meel dhigno ballamo isku maalin ah. Fadlan isku day inaad wacdo sida ugu dhaqsaha badan. Fadlan ha codsan ballamo isla maalintaas adoo u maraya bogga bukaanka. Soo dhaweynta ayaa ku ogeysiin doonta helitaankeena maalintaas. Waxaa lagu siin doonaa xafiiska iyo bixiyaha leh furitaanka maalintaas. Waxaan isku dayi doonaa inaan la jaanqaadno jadwalkaaga, laakiin dammaanad kama qaadi karno in waqtiga iyo goobta aan ka shaqeyn karno ay noqon doonto doorashadaada koowaad.
Fadlan imow 15 daqiiqo kahor si aad u buuxiso waraaqaha.
Siyaasadda Waqtiga-Gaarka ah:
Waxaan fahansanahay xitaa qofka ugu abaabulan ordi kara goor dambe mararka qaarkood. Hadday saas tahay, fadlan wac xafiiskayaga kahor ballantaada ballanta. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan dib u dhigno jadwalka booqashadaada waqti adiga kugu habboon. Haddii aadan wicin waxyaabaha soo socda ayaa lagu dabaqi doonaa:
Bukaannada imanaya goor hore, waqtigooda, ama ilaa 20 daqiiqo oo daaho ah ayaa lagu arki doonaa sida loogu talagalay.
Bukaannada jiran ee imanaya ugu dambayn 20 daqiiqo ayaa la arki doonaa, laakiin waa inay sugaan inta aan ka arki doonno bukaanno waqtigooda ku dhacay.
Bukaannada joogtada ah waxaa la siin doonaa ikhtiyaar ay dib ugu dhigaan jadwalkooda ama ay sugi karaan booska furan ee soo socda. Haddii uusan jirin meel furan, bukaanku wuxuu u baahan doonaa inuu waqti kale u qabsado.
Fadlan horay u wac; “Daadinta ins” ma ahan cadaalad bukaanada horay u qorsheeyey.
Haddii aadan ballan sameyn karin, fadlan soo wac xafiiskayaga si aad noo soo ogeysiiso. 24 saac oo ogeysiis ah ayaa loo baahan yahay si looga hortago $ 35.00 lacag-bixin la'aan. Haddii aad bukaan-socod ku cusub tahay oo aanad tusin ballantaada ugu horreysa ma awoodi doontid inaad dib u dhigatid. Bukaannada la aasaasay, haddii aad 3 ama in ka badan aan wax bandhig ah ku sameyn muddo 12 bilood gudahood ah waxaad xaq u yeelan doontaa in lagaa joojiyo howsha.